ဟဒီးဆ်: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيءقدير အကြင်သူသည် ဤဇိက်ရ်တော်ကို ဆယ်ကြိမ်ရွတ်ဖတ်လျှင် ထိုသူသည် အစ္စမာအီးလ် (အလိုင်းဟိစ္စလာမ်)၏ သားစဉ်မြေးဆက်မှ ကျွန်လေးဦးအား သူကောင်းပြုသူကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍقَدِيرٌ အကြင်သူသည် ဤဇိက်ရ်တော်ကို ဆယ်ကြိမ်ရွတ်ဖတ်လျှင် ထိုသူသည် အစ္စမာအီးလ် (အလိုင်းဟိစ္စလာမ်)၏ သားစဉ်မြေးဆက်မှ ကျွန်လေးဦးအား သူကောင်းပြုသူကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား: ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . ထွတ်မြတ်မှုများ။ . ဇိက်ရ်၏ ထွတ်မြတ်မှုများ။ .
عن أبي أيوب -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ قَالَ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إسْمَاعِيلَ».
အဗူအိုင်ယူဗ် (ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) မိန့်ကြားတော်မူသည်။ အကြင်သူသည် ဤဇိက်ရ်တော်- لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،لَهُ الْمُلْكُ،وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (တုဖက်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကင်း၍ တစ်ဆူတည်းဖြစ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်မှအပ အခြားကိုးကွယ်ထိုက်သော အရှင်ဟူ၍ အလျဉ်းမရှိပြီ။ စိုးပိုင်ခြင်းဟူသမျှသည် ထိုအရှင်မြတ်အဖို့သာ ဖြစ်တော်မူ၏။ ချီးမွမ်းထောမနာခြင်း ဟူသမျှသည် ထိုအရှင်မြတ် အဖို့သာဖြစ်တော်မူ၏။ ထိုအရှင်မြတ်သည် အရာခပ်သိမ်းကို စွမ်းဆောင် နိုင်တော်မူသော အရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။) ကိုဆယ်ကြိမ်ရွတ်ဖတ်လျှင် ထိုသူသည် အစ္စမာအီးလ် (အလိုင်းဟိစ္စလာမ်)၏ သားစဉ်မြေးဆက်မှ ကျွန်လေးဦးအား သူကောင်းပြုသူကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။
(သောင်ဟီးဒ်) အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်တစ်ဆူတည်းသာ ခဝပ်ကိုးကွယ်ခြင်း ခံထိုက်ကြောင်း ဝန်ခံထွက်ဆိုထားသည့် ဤဇိက်ရ်တော်၏ မွန်မြတ်မှုကို ဟဒီးဆ်တော်က ညွှန်ပြထားသည်။ အကြင်သူသည် ထိုဇိက်ရ်တော်အား သိနားလည်ပြီး ၎င်း၏ တောင်းဆိုချက်အတိုင်း လိုက်နာကျင့်သုံးမှုပြုကာ ဆယ်ကြိမ်ဖတ်ရွတ်လျှင် ထိုသူ့အတွက် အိဗ်ရာဟီးမ်(အလိုင်ဟိစ္စလာမ်)၏သားတော် အစ္စမာအီးလ် (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်)၏ သားစဉ်မြေးဆက်မှ ကျွန်လေးဦးအား သူကောင်းပြုသူကဲ့သို့ အကျိုးကုသိုလ်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဘာသာပြန်: အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ် စပိန် တူရကီ အုရ်ဒူ အင်ဒိုနီးရှား ဘော့စနီးယား ရုရှား ဘင်္ဂလီ တရုတ် ဖါရစီ(ပါရှန်း) တဂ္ဂလော့ ဟင်ဒီ ဗီယက်နမ် ဆင်ဟာလီ ကာ့ဒ် ဟောက်ဆာ ပေါ်တူဂီ မလေးရာလမ် တေလဂူ ဆွာဟီလီ တမီးလ် ထိုင်း
အစ္စလာမ်သာသနာ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည့် ကလိမဟ် သောင်ဟီးဒ် ပါဝင်သော ဤဇိက်ရ်တော်၏ ထွတ်မြတ်မှုကိုသိရှိရသည်။
ချွတ်ယွင်းမှုအပေါင်းမှကင်းစင်တော်မူပြီး၊ မြင့်မြတ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ခဝပ်ကိုးကွယ်မှုခံထိုက်ခြင်း၊ စိုးပိုင်ခြင်းနှင့် ချီးမွမ်းခံထိုက်ခြင်းတို့တွင် တစ်ပါးတည်းဖြစ်တော်မူသည်။
ဟဒီးဆ်တော်မှသိရှိရသည့် အကျိုးကျေးဇူးတစ်ခုမှာ - အလုံးစုံသော စိုးပိုင်မှုနှင့် အလုံးစုံသော ချီးမွမ်းခံထိုက်ခြင်းတို့သည် မုချဧကန် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အတွက်သာဖြစ်ပြီး ထိုအရှင်မြတ်၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုသည် အရာခပ်သိမ်းအား လွှမ်းခြုံထားကြောင်း သိရှိရသည်။
ဤဇိက်ရ်တော်တွင် "يُحْيِي وَيُمِيتُ" (အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် ရှင်စေ၊ သေစေ တော်မူသောအရှင်ဖြစ်သည်) ဟူသော စာသား မပါရှိပေ။
တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)၏မိန့်ကြားချက်တွင် “ဆယ်ကြိမ်” ဟုသာ လာရှိထားသောကြောင့် ဟဒီးဆ်တော်အရ ပေါ်လွင်နေသည်မှာ ထိုအရေအတွက်ကို တစ်ဆက်တည်းဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ခွဲ၍ရွတ်ဆိုသည် ဖြစ်စေ အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အကယ်၍ ကျွန်ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းခံရှိသွားပါက အချို့သော အရဗ်များသည်ပင်လျှင် ကျွန်ဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်း ဟဒီးဆ်တော်အရ သိရသည်။
အရဗ်လူမျိုးများသည် အစ္စမာအီးလ် (အလိုင်ဟိစ္စလာမ်)၏ သားစဉ်မြေးဆက်မှ ဖြစ်သည့် အတွက် အခြားလူမျိုးများထက် မွန်မြတ်မှုရှိကြောင်း တင်ပြထားသည်။
ထွတ်မြတ်မှုများနှင့် အာဒါဗ်စည်းကမ်းများ။ . ထွတ်မြတ်မှုများ။ . ဇိက်ရ်၏ ထွတ်မြတ်မှုများ။ .
ကျွန်တစ်ဦးသည် အပြစ်အကုသိုလ်တစ်ခုကို ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးနောက် ၎င်းက အို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ကျွန်တော်မျိုး၏ အပြစ်ကို ခွင့်လွတ်တော်မူပါဟု တောင်းခံခဲ့သည်။ ထိုအခါ မင်္ဂလာအပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံတော်မူသော ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော်မူသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ ငါအရှင်မြတ်၏ကျွန်သည် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ပြီးနောက် ၎င်းထံတွင် အပြစ်အကုသိုလ်တို့ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူသောအရှင်၊ပြစ်မှုတို့ကို အရေးယူတော်မူသောအရှင် ရှိကြောင်းသိရှိခဲ့သည်။
عربي English Français Español Türkçe اردو Indonesia Bosanski Русский বাংলা ভাষা 中文 فارسی Tagalog हिन्दी Tiếng Việt සිංහල كوردی Hausa Português മലയാളം తెలుగు Kiswahili தமிழ் ไทย
+ရှင်းလင်းချက် +အင်္ဂလိပ် +ပြင်သစ် +စပိန် +တူရကီ +အုရ်ဒူ +အင်ဒိုနီးရှား +ဘော့စနီးယား +ရုရှား +ဘင်္ဂလီ +တရုတ် +ဖါရစီ(ပါရှန်း) +တဂ္ဂလော့ +ဟင်ဒီ +ဗီယက်နမ် +ဆင်ဟာလီ +ကာ့ဒ် +ဟောက်ဆာ +ပေါ်တူဂီ +မလေးရာလမ် +တေလဂူ +ဆွာဟီလီ +တမီးလ် +ထိုင်း